Habka Codsiga Jinsiyadda ee Saint Lucia | Dhalashada Saint Lucia
Nidaamka Codsiga Jinsiyadda ee Saint Lucia
Muwaadinimada Guddiga Maalgashiga ayaa tixgelin doonta codsi muwaadinnimo natiijada ka dhalan kartaana waa inay tahay in la bixiyo, loo diido ama dib loo dhigo sababaha, dalabka dhalashada maalgashi.
Waqtiga celceliska socodsiinta laga bilaabo helitaanka dalabka illaa ogeysiinta natiijada waa saddex (3) bilood. Halka, xaaladaha gaarka ah, la filayo in wakhtiga hawlgalku ka dheeraado saddex (3) bilood, wakiilka idman ayaa la ogeysiin doonaa sababta daahitaanka la filayo.
Codsiga dhalashada maal gashiga waa in lagu soo gudbiyo qaab elektiroonig ah oo daabacan wakiilka idman isagoo ka wakiil ah codsade.
Codsiyada oo dhan waa inay ku buuxiyaan Ingiriis.
Dukumiintiyada la soo gudbiyo arjiga waa inay ku qoran yihiin Luqadda Ingiriisiga ama tarjumaad la xaqiijiyay oo lagu tarjumay Afka Ingiriisiga.
FG: Tarjumad la hubo macnaheedu waa turjumaad ay sameeyeen mid tarjubaan xirfadle ah oo si rasmi ah loogu aqoonsaday maxkamad sharciyeed, hay'ad dawladeed, hay'ad caalami ah ama hay'ad rasmi ah oo la mid ah, ama haddii laga hirgaliyay wadan aysan jirin turjumaano rasmi ah oo la aqoonsan yahay, turjumaad ay sameysay shirkad doorkeeda ama ganacsigeedu uu saamaynayo tarjumaadda xirfadeed.
DHAMMAAN dukumiintiyada taageeraya baahiyaha waa in lagu soo lifaaqo codsiyada kahor intaysan ka baaraandegin Unugga.
Codsiyada oo dhan waa inay la socdaan baahida loo qabo dib-u-celinta lacag-celinta iyo ujrooyinka dadaalka ee codsadaha maamulaha, afadiisa / seeda / afadiisa iyo mid kasta oo kale oo ku-habboonaan u leh.
Foomamka aan dhammaystirnayn ee dalabka waxaa lagu celin doonaa wakiilka idman.
Markii codsi muwaadinnimo laga helo maalgashi, Qeybta waxay ogeysiineysaa wakiilka idman in maalgashiga u qalmida iyo ujrooyinka maamulka dowlada ay tahay in la bixiyo kahor inta aan la bixin Shahaadada Jinsiyadda.
Meesha la diido dalab, codsaduhu wuxuu, qoraal ahaan, codsan karaa dib u eegista Wasiirka.